Itephu yefektri -iTap yaseTshayina Abavelisi, abaXhasi
Inkcazo yemveliso: Le pomp ye-chrome ye-monobloc izisa umzobo wokugqibezela ekhitshini lakho. Ilungele iinkqubo eziphezulu nezisezantsi zoxinzelelo. Kubandakanya ukuza no-1/2 ″ I-BSP yowesifazane eguqulweyo ngokugqobhoza kunye nencwadana yemiyalelo Ukusebenza: ¼ jika ngokufanelekileyo Uxinzelelo lwamanzi: Uxinzelelo oluphezulu okanye olusezantsi Ngohlobo lwayo oluphambili, itephu ekhitshini elitsha le-Ambi ngumdibaniso ogqibeleleyo woyilo oluhle, ubunjineli obuphambili kunye nokusebenza okumangalisayo . Umxhubi opholileyo kunye nocekeceke oqinisekileyo ukuba ucocekile ...
Inkcazo yemveliso: Ubhedu olubunjwe nge-Chrome ngumhlaba onzima kwaye ozinzileyo ekulula ukuba ucoceke. Ukufakwa kwetephu yokuxuba kunezinto ezinzima, ezinokuqina zekhephu zangaphakathi ezinokulawula ubushushu obuphezulu obenzeka xa utshintsha ubushushu bamanzi. Ukuba awuqinisekanga ngokufakwa, nxibelelana nochwephesha. Olu fakelo luyakwenziwa ngokungqinelana nemigaqo efanelekileyo yezakhiwo kunye nemibhobho yamanzi. Ukubekwa kumngxunya ongama-35mm kwi-max. I-50 mm ubukhulu ye-sink / indawo yokusebenza. I-accor evavanyiweyo neqinisekisiweyo ...
Inkcazo yemveliso: Umxube wokufakelwa kompompo unama discs anqabileyo e-ceramic akwaziyo ukujongana nobushushu obuphezulu obenzeka xa utshintsha ubushushu bamanzi. Impompo yokuxuba ikhitshi inokusetyenziswa kwiinkqubo zoxinzelelo oluphezulu. Kuvavanywa ukulawula uxinzelelo max. Ibha ye-10 (1000 kPa). Uxinzelelo lomsebenzi ocetyiswayo: I-1.0 - 5.0 ibha (100 kPa - 500 kPa). Ukubekwa kumngxunya ongama-35mm kwi-max. I-50 mm ubukhulu ye-sink / indawo yokusebenza. Amanzi kunye nokonga amandla okonga amanzi (5.7 l / min.) Kwiinkqubo zoxinzelelo oluphezulu ...
Uhlobo lweenkcukacha: I-Basin Faucets, ubuso basin faucet iProjekthi yokuSombulula isakhono: uyilo lwegraphic, isisombululo esipheleleyo seeprojekhthi, Inqanaba lokudityaniswa kwamacandelo eminqamlezo: I-JT-2007 Surface Therapy: Intaba yeFole yomgaqo: Iindledlana zokuFakelwa kweHole enye: Uhlobo oluDwelisiweyo Inani leZiphatho: Ibhatyi enye Isitayile: Imathiriyeli yeValve yelixesha lethu: Imveliso yeCeramic: Igumbi lokuhlambela uBuso obuCwangcisiweyo Beka amanzi kwi-Basin Tump Basin Faucet Cartridge Ixesha lokuphila: I-500,000 yobomi kwimijikelo yovavanyo lwamanzi: 0,6-1.5Mpa 100% uxinzelelo ...
Ubungakanani bepakeji yobukhulu: 13.2 x 6.7 x 2.9 intshi Umbala: Ibrush eNickel Isitayile eside emngxunyeni omnye wokutshiza igumbi lokugqibela Gqibezela: Ibrashi yeNickel yeMpahla: iStrainless Shape: I-Tout spout mixer tap Inombolo yeeHoli: 1 Inani lezandla: 1 Ukubamba isixhobo sePlagi yeMetwork. : I-Deck Mount Special Iimpawu zokuSebenzisa: I-Vessel sink faucet Ukusetyenziswa: Isibambo se-Indoor Singal, isiphatho se-lever senza kube lula ukuhlengahlengisa ukuhamba kwamanzi kunye namaqondo obushushu. Isibambo esinye somngxunya omnye owakhiwe ngentsimbi engenasici, i-matte emnyama ...